Vaovao - Tekstika vita amin'ny fitsaboana ho an'ny dokotera
Misy lay 2 amin'ity lamba medaly TPU.
Ny voalohany dia lamba fototra. Izy io dia lamba tsy lamba.
Ny endrika ambany dia sarimihetsika TPU. Izany dia mahatonga ny lamba ho zotram-pahazavana sy tsy ahodin-drano.
Ny sosona TPU malefaka sy malefaka dia mety hampitombo ny tanjaky ny lamba ary manempotra ny lamba.
1) fanoherana ny bakteria sy tsy poizina
2) Fihenan-drivotra mahery ho an'ny vokatra inflatable
3) Rano tsy mandeha aman-tany
4) Ny fanoherana ny hafanana ambany be, dia azo ampiasaina eo ambanin'ny -22 ° c
5) Ny tontolo iainana sy tsy misy poizina, dia mety ho levon'ny microorganism ao anatin'ny 3-5 taona rehefa alevina.
6) Malemy fanahy sy malefaka fahatsapana
1) Raha vaovao ianao amin'ity sehatra ity, afaka manome torohevitra anao izahay raha miankina amin'ny traikefa efa 15 taona mahery. Inona no tsara kokoa azontsika atao ny manolotra alàlana ny kalitao sy mpanamboatra milina avo lenta aminao.
2) Ireo voafaritra dia azo atao mifanaraka amin'ny takian'ny mpanjifa, ao anatin'izany ny lamba fototra, ny lokon'ny lamba fototra, ny hateviny, ny hateviny ary ny lokon'ny sarimihetsika TPU, ny sakany sy ny fonosana.
3) Ny baiko modely sy ny filaharana kely dia azo ekena
4) Azo nalefa aminao ny santionany maimaimpoana mba hanamarinana ny kalitao, fa tokony handoa ny postage ianao
ny orinasa ho orinasa orinasa Medical, raha mila izany pls mifandray aminay.